Izindaba - Manufacturer
I-KingTai Inkampani ingumkhiqizi ophelele wokuhweba ohlanganisa ukukhiqiza nokuthengisa.Sinayo ithimba lethu lefektri nelaphesheya kwezentengiso, ifektri yethu itholakala eHui Zhou City Guangdong Province.
Inkampani yethu ine iminyaka engaphezu kwengu-20 isipiliyoni e yezandla metal.
Okufana ne: ibheji, isivuli, izindondo, okhiye wesikhiye, isikhumbuzo, ama-cufflink, i-lapel pin, ibhukumaka, njll. Futhi sisebenza nomkhiqizo odumile, njenge: Harry potter, Disney, Wal-mart, Universal Studios njll.
Kusukela yaqala ukusebenza, isitifiketi namalungelo obunikazi esiwatholile angaphezulu kwezicucu ezingama-30, eziningi zazo okungu-SOS, Sedex ne-ISO9001.
Sihlala sinamathela ekukhiqizeni okuphezulu, izindinganiso zekhwalithi ephezulu ukuzidinga.Ngemva kokuphothulwa kwenqubo ngayinye, sineqembu elikhethekile le-QC lokuhlola ukuthi ngabe imikhiqizo ihambisana nenqubo elandelayo yini, ukuze kuqinisekiswe isilinganiso semikhiqizo efanelekile.
Le nkampani inomthamo owanele wokukhiqiza namandla wokugcina.Ngokujwayelekile, lapho ithimba lethu le-QC lihlola imikhiqizo, lizokhetha imikhiqizo engafanelekile bese livumela imikhiqizo efanelekayo ukuthi ingene kwinqubo elandelayo. Lapho-ke imikhiqizo engafaneleki izobuyiselwa kwinqubo yangaphambilini yokuphinda igcwaliswe.Ngasikhathi sinye, sinesilinganiso sokulawula izinga lokudlula lemikhiqizo ngesikhathi sokuhlolwa.Lokhu kusethwe ngokuya ngemikhiqizo ehlukile. Isibonelo, isilinganiso sethu se-badge qualification ngu-95%. Lapho umkhiqizo ongafanelekile usuphakeme kunalolu banga, sizolungisa umkhiqizo ongafanelekile.Sicela usazise uma isilinganiso sakho sokuphasa esilindelekile singama-98%, ukuze sikwazi ukuhlinzeka ngezinga lokuphasa lomkhiqizo ngesikhathi sokuhlolwa.Sinendawo enkulu yokugcina eyanele futhi imvelo ukuxhasa ama-oda amakhulu.Sicela usazise uma udinga ukuthunyelwa okuyingxenye. Indawo yethu yokugcina izinto izonakekela ukugcinwa kwempahla.
Namuhla i-King Tai isebenza ngenhloso yesevisi yekhasimende futhi ibambe iqhaza embukisweni we-canton fair kanye ne-hong kong. Iminyaka eminingi. Sinikeza insizakalo eqotho kumakhasimende nokugcina ukuqamba kabusha ngobuso bezinto ezinhle kakhulu zokuphila.